गगन थापाको साथ ज्ञानेन्द्र शाहीलाई, योगेशमाथि खनिए ! « रिपोर्टर्स नेपाल
गगन थापाको साथ ज्ञानेन्द्र शाहीलाई, योगेशमाथि खनिए !
काठमाडौं, ३१ भदौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन कुमार थापाले ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि सत्तारुढ दल युवा संघले लगाएको प्रतिबन्ध स्विकार्य नभएको कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । सोमबार आफ्नो फेशबुकमा एक स्टाटस लेख्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद थापाले यस्तो बताएका हुन् ।
शाहीलाई काँस्की प्रवेशमा रोक लगाएको युवा संघको विज्ञप्तीपनि सँगै पोष्ट गर्दै थापाले भनेका छन्,’कमरेड ! यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । ज्ञानेन्द्र शाही त के ज्ञानेन्द्र शाह पनि यहाँ स्वतन्त्रपूर्वक हिंड्न पाउँछन् । आफ्नो विचार राख्न पाउँछन् । गल्ती गर्नेलाई विधिले बाँध्ने हो, निषेध गर्ने होईन् । सरकारको गति र मति ठिक पार्नुहोस् । आफ्नो अरिंगाल प्रवृत्ति छोड्नुहो्स परिवर्तनविरोधी तत्व आफैं समाप्त हुन्छन्।’
गत शनिबार नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आउने क्रममा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले बुद्ध एयरको जहाजलाई करिब आधा घण्टा कुराएका थिए ।मन्त्रीलाई कुर्दा भएको ढिलाई कारण जहाजभित्र ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतले मन्त्रीविरुद्ध नारावाजी र गालीगलौज गरेका थिए ।
तर, यो प्रकरणमा सोही दिन राति नै मन्त्री भट्टराईले एक स्टाटस लेखी माफीसमेत मागिसकेका थिए । वमानस्थलमा ढिलाई गर्दा यात्रुले सास्ती व्यहोरेको भनेर जहाजभित्रै हुलहुज्जत भएको विषयमा शाहीमाथि अहिले नेकपाका भातृ संगठनका जिल्ला शाखाहरुले कडा चेतावनी दिएका छन् ।
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पोखरा र धनुषामा निषेध
आज कहाँ–कहाँ बर्षा,
काठमाडौं, साउन ३१ । हाल देशका अधिकांश भू–भागको मौसममा समान्य देखि पूर्ण बदली रहेको छ
काठमाण्डौ उपत्यकामा अधिकांश सेवा बन्द, जमघट निषेध
साउन ३०, काठमाण्डौ । राजधानीका तीन जिल्लामा ३ दर्जन भन्दा बढी सेवा र व्यापार व्यवसाय
यो शैक्षिक सत्र धरापमा, विद्यार्थीको भविष्यबारे सरकार उदासिन
साउन ३०, काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न मुलुक नै लकडाउन गरियो । नयाँ
सर्वोच्च अदालतले बनायो विकृति, भ्रष्टाचार र विचौलियाको छानविन गर्न समिति
साउन ३०, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको चलखेल कसरी
काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको संघारबाट तत्काल जोगिएको छ । सचिवालयका छ
काठमाडौंमा एकैदिन ११९ जना कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं, ३० साउन । काठमाडौं उपत्यकामा आज एकै दिन ११९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्
जनमैत्री अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउन जनप्रतिनिधीको माग
साउन ३०, काठमाण्डौ । काठमाण्डौ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितहरु दिनप्रतिदिन बढिरहँदा उपचारमा समस्या देखिन थालेको छ